Barakacayaal ka cabanaya inay roobabka waxyeelo u gaysteen
Muqdisho 17 Apr, 2012Roobabkii saacadihii ugu dambeeyay ka da,ay gudaha magaalada Muqdisho ayaa sababay dhimashada ilma yar oo lix bilood jir ah kaam ku yaala agagaarka warta Siigaale ee degmada Hodon ee magaalada Muqdisho, ilmahaan yar ayaa la sheegay in ay qaadeen biyaha roobka dabadedna uu ku dhacay gunta hoose ee warta halkaasoo uu ku haftay biyihii dabadeedna uu ku geeriyooday.
“Waxaa na qaaday biyihii roobka dhammaan agabkii aan wax ku cunaynay iyo catiirkii aan nku seexanaynayba waxaa qaaday biyaha roobka oo ahaa kuwa aad u xoogan” sidaana waxaa idaacadda Ergo u sheegtay Faaduma Ceymooy oo ka mid ah qoysaska ku nool kaamka warta Siigaale ee degm,ada Hodon, Faaduma ayaa sidoo kale sheegtay in ay taaganyihiin bannaanka isla mar ahaantaana aanay heysanin wax hooy ah aqaladii ay dhesteena uu ka qaaday roobka.
“Waxaan ka soo barakacay markeygii hore gobolka Baay halkaana waxaan imid mar dhaw, waana u jeedaan halka aan taagannahay aniga iyo caruurtayda ,ma qabno dhar aan ka dugsano dhaxanta iyo qabowga daran ee uu wato roobka ,waxaan codsanaynaa in kaalmo degdeg ah sida baco, iyo dharba naloo keeno” sidaana waxaa Ergo u sheegay Aadan Kuusoow oo ka mid ah barakacayaal saamayn xoogan uu ku yeeshay roobabka ka da,aya magaalada caasimadda ah ee Muqdisho. Roobabkaan ayaa saamayn ku yeeshay dadka xanuunsan,caruurta iyo dadka waayeelka ah Cabdi Xasan waxaa uu kamid yahay barakacayaasha ku nool degmada Hodo nee magaalada Muqdisho waxaa uu idaacadda Ergo u sheegay in uu hayo hooyadii iyo abootadii oo labaduba ah waayeelo,waxaana uu yiri,waxaa uu roobku qaaday hooyaday,neftii ayaa ku dhagtay xaaladdedu waxay noqotay mid halis ah , nasiib wanaag biyihii oo sii wata ayay gacanta la heshay geed weyn sidaas ayayna ku bad baadday.
Qoysaska barakacayaasha ayaan iyagu badidood lahayn hooy adag oo ay kaga dhuuntaan dhaxanta,kulaylka ,iyo roobabka,waxaana guryaha ay ku jiraan ay u badan yihiin gurya ka samaysan maryaha duugoobay, jawaano, baakado iyo baco dildilaacay.
Si kastaba ha ahaatee Roobabkaan ayaa qayb ka ah roobabkii xilliga Gu,ga oo ka curtay qeyba badan oo ka mid ah Soomaaliya waxaana ka mid ah gobollada uu ka curtay Shabeelaha hoose,Baay, Banaadir iyo meelo kale . Cabdulqaadir Cabdulle/AA/MG